Mpanamboatra sy mpamatsy Drical Conical | Mingtaishun
Nandritra ny taona maro, nifikitra tamin'ny foto-kevitry ny mpanjifa mifototra amin'ny kalitao izahay, mikatsaka ny hatsarany, fizarana tombony ho azy roa. Manantena izahay, miaraka amin'ny fahatsoram-po sy finiavana lehibe, hanana voninahitra hanampy amin'ny tsenanao lavitra.
Satria ny fampiraisana ara-toekarena manerantany dia mitondra fanamby sy fotoana mety amin'ny indostria xxx, ny orinasanay, amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny fiaraha-miasa, ny kalitao voalohany, ny fanavaozana ary ny tombotsoan'ny fiaraha-mientana, dia matoky tena hanome ny mpanjifanay am-pahatsorana ny vokatra mahay, ny vidin'ny fifaninanana ary ny serivisy lehibe, ary hanangana ho avy mamiratra kokoa amin'ny alàlan'ny fanahin'ny avo kokoa, haingana kokoa, matanjaka miaraka amin'ireo namantsika miaraka amin'ny alàlan'ny fitondrana ny fifehezana antsika.
1. Ny dingana fandavahana dia mety amin'ny fandavahana sy fanitarana lavaka marobe amin'ny faritra manify amin'ny metaly, fantsona, plexiglass, plastika, hazo hatramin'ny 5mm ny hateviny.
3. Ny savaivony isan-karazany amin'ny savaivony dia azo alefa amin'ny fampiasana fitaovana iray ihany.
4. Edge tokana fanapahana: mamorona lavaka boribory lenta amin'ny vy, plastika, hazo ary fitaovana manify hafa tsy misy totohondry afovoany.
5. Ny vy haingam-pandeha dia manome fiainana tsara sy marina tsara.
6. Round Shank: mifanentana amin'ny ankamaroan'ny karazana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ary manome mazava tsara.
7. Amin'ny fampiasana rotary ihany.
Miaraka amin'ny kalitao avo lenta, vidiny mirary, fandefasana ara-potoana ary serivisy namboarina sy natao manokana hanampiana ny mpanjifa hahatratra ny tanjon'izy ireo amin'ny fomba mahomby, nahazo fiderana ny orinasanay na amin'ny tsena anatiny sy ivelany. Tongasoa ny mpividy mba hifandray aminay.
Noho ny kalitao sy ny vidiny mirary, ny vokatra dia naondrana tany amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 10. Manantena ny hiara-hiasa amin'ny mpanjifa rehetra avy any an-trano sy any ivelany izahay. Ankoatr'izay, ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tadiavinay mandrakizay.
Fantatry ny ekipanay fa tsara ny fitakian'ny tsena any amin'ny firenena samy hafa, ary afaka mamatsy vokatra tsara kalitao amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny tsena samihafa. Ny orinasanay dia efa nanangana ekipa matihanina, mahay mamorona ary tompon'andraikitra hampivelatra ny mpanjifa miaraka amin'ny fitsipiky ny fandresena marobe.
Teo aloha: MTS HRC55 Fihodinan-drivotra mivaingana (3D)
Manaraka: Carbide Metal Insert For Milling / Turning RPMT1003MO-TT-DH122
MTS HRC55 3 Boribory Chamfering Drill
55 HRC Carbide 3 sodina fenitra halavany farany famaranana ...